မော်လမြိုင် Job Bank – Mawlamyine Daily
Category: မော်လမြိုင် Job Bank
မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Northern ABC Runner Company Limited အတွက် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူ
မျောလမွိုငျ၊ ၄ ဇွန် ၂၀၂၀
Mawlamyine Daily	သတင်း, အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment June 4, 2020 1 Minute
မော်လမြိုင်၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ဝန်ထမ်းနေရာ ၁၅ နေရာအတွက်ခေါ်ယူနေတာပါ။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး မော်လမြိုင်မြို့၊ ပန်းပဲတန်းရပ်၊ ရုံးကြီးလမ်းရှိ မြို့နယ် စုပေါင်းရုံးထံ လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment February 6, 2020 February 7, 2020 1 Minute
မျောလမွိုငျ၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀
Mawlamyine Daily	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment February 3, 2020 1 Minute
Synergy Elite Group မှ Sale and Marketing Manager ရာထူးအတွက် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူ
မျောလမွိုငျ၊ ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉
Mawlamyine Daily	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment December 23, 2019 1 Minute
Smart Campus Myanmar မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူ
မော်လမြိုင်၊ ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ မော်လမြိုင်၊ ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Smart Campus Myanmar မှ Sale and Customer Service Assistant ရာထူးအတွက် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေပါတယ်။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ ဘွဲ့ရပြီး အသက် ၂၀ မှ ၃၀ ကြားရှိသူ၊ လုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ ၁ နှစ်ရှိပြီး ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ လစာကတော့ ၂သိန်းမှ ၃သိန်းအထိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ လျှောက်ထားချင်တယ်ဆိုရင် CV ကို tnlin@asiastarmar.com သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၉၆၅၀၅၄၁၃၁ ကို … Continue reading Smart Campus Myanmar မှဝန်ထမ်းခေါ်ယူ →
Mawlamyine Daily	သတင်း, အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment September 27, 2019 1 Minute
Seed for Myanmar မှ အနုပညာနှင့် သရုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားသူ ခေါ်ယူ
မော်လမြိုင်၊ ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
Mawlamyine Daily	သတင်း, အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, အနုပညာ, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment September 22, 2019 1 Minute
လူငယ်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းအတွက် အလုပ်သင်ဝန်ထမ်း ၂ဦး ခေါ်ယူ
မော်လမြိုင်၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ မော်လမြိုင်မြို့ မှာရှိတဲ့ National Enlightenment Institute (NEI) မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အလုပ်သင်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရရင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ထိ ပြုလုပ်မယ့် လူငယ်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းအတွက် အလုပ်သင် ၀န်ထမ်း အနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ရမှာပါ။ အလုပ်သင်ကာလ အဖြစ် ၂၀၁၉ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၇ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်း သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ လျှောက်ထားချင်သူတွေဟာ- • National Enlightenment Institute (NEI) မှ ပြုလုပ်သော လူငယ်နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုသင်တန်းဆင်း ကျောင်းသား/သူဟောင်း • မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်လျောညီထွေလုပ်ကိုင်နိုင်သူ • … Continue reading လူငယ်နှင့်ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းအတွက် အလုပ်သင်ဝန်ထမ်း ၂ဦး ခေါ်ယူ →
Mawlamyine Daily	ပညာရေး, အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment September 20, 2019 1 Minute
Pact Myanmar မှ Lead Community Trainer ခေါ်ယူ
မော်လမြိုင်၊ ၁၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
Mawlamyine Daily	ပညာရေး, သတင်း, အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment September 16, 2019 1 Minute
Tecno Mobile မှ Service Technician ခေါ်ယူ
မော်လမြိုင်၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉
Mawlamyine Daily	နည်းပညာ, သတင်း, အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment September 14, 2019 1 Minute
မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Fortune(Broadband)Showroom မှ ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူ
မော်လမြိုင်၊ ၁၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Fortune(Broadband)Showroom မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အောက်ပါ ရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေပါတယ်။ Branch Manager - (1) Posts 2. Senior Engineer - (1) Post 3. Assistant Sales Manager - (1) Post 4.Direct Sale (Junior Level) - (1) Post 5.Sales Centre (Showroom) - (2) Posts 6. Cashier - (1) Post 7. Admin Assistant - (1) Posts 8.Security - … Continue reading မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Fortune(Broadband)Showroom မှ ဝန်ထမ်းများ ခေါ်ယူ →
Mawlamyine Daily	သတင်း, အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း, မော်လမြိုင် Job Bank, Lifestyle	Leaveacomment September 13, 2019 1 Minute